स्रोतापन्न कसलाई भन्ने ? | BodhiTv
स्रोतापन्न कसलाई भन्ने ?
बुद्ध शिक्षा अनुसार क्रमश बढ्दै जाने चार आर्य पुद्गल हरुमा कान्छो आर्य पुद्गल स्रोतापन्न हो पछिका ज्येष्ठ आर्यहरुमा सकृदागामि , अनागामि र अरहन्तहरु हुन् । आर्य अष्टांगिक मार्गको समाचरण गर्दै विपश्यना ज्ञान परिपक्व भएमा स्रोतापन्न मार्ग ज्ञान र फल ज्ञानमा आरुढ हुन्छ ।
स्रोतापन्न आरुढ पुद्गलले दस संयोजन मध्ये दृष्टि , विचिकिच्छा र शीलब्रतपरामाश तीन संयोजन प्रहाण गरी सदाकालागि चार अपाय दुर्गतिको ढोका बन्दगर्दछ । ६२ वटा मिथ्या दृष्टिले जनम जनम जकेटेर आएको ( Miss connections of 62 software ) लाई सर्ब प्रथम प्रज्ञाले प्रहाण गर्दछ । main miss connection of miss understanding मा – स्वकाय मिथ्या दृष्टि , सास्वद वाद मिथ्या दृष्टि र उच्छेदवाद मिथ्या दृष्टि पर्दछन् । ती मिथ्या दृष्टिको कारणले – एतं मम … एतमहं अस्मि ,
एषमे आत्मा भन्ने – म , मेरो र मेरो आत्म जस्ता मिथ्या ग्राहले भव चक्रमा घुमाउँदछ ।
आर्य अष्टांगिक मार्गको अभ्यास र चार आर्य सत्यको साक्षात्कार बिना ब्यक्ति ती मिथ्या भ्रमबाट छुट्दैन । तर जबजब शील , समाधि र प्रज्ञाको समाचरणले ब्यक्ति । आर्य बन्दछ , उस्को जीवनमा महान परिवर्तन आउँछ अनि जीवन र जगतलाई देख्ने दृष्टिनै अर्कोहुन्छ ।
शील , समाधि , प्रज्ञा अष्टांगिक मार्गको अर्को परिभाषा हो । त्यसप्रकारको पुद्गललाई स्रोतापन्न ( source winner ) आर्य पुद्गल नामले पुकारिन्छ । यद्यपि उस्का सबै क्लेश प्रहीण नभएता पनि ऊ सत्मार्गमा प्रथम आर्य पुद्गल बन्न पुग्दछ । अब उस्ले कदाचित बाटो बिराउने छैन … यो मानव जीवनको महान उपलब्धी हो । आजको सन्दर्भमा त्यो कर्मलाई मानवको कल्याणकारी परम पुरुषार्थ भन्न सकिन्छ । त्यस माथिका मार्गहरुमा त्यो पुद्गल उस्को इच्छा र अभ्यास अनुरुप ढिलो छिटो अवश्य आरुढ हुनेछ ।
हे मानव …! तिमी हामी भौंतारिएको धेरै भैसकेछ … आज अवसर परेकोछ । सबैतिरबाट जान्न बुझ्न र अभ्यास गर्न प्रयास गर्दै अमूल्य र दुर्लभ यो चोला सफल पारौं । यो परम कल्याणकारी मानव हिताय सुखाय बुद्ध शिक्षाहो । कुनै ब्यक्तिको कपोलकल्पित कोरा तर्क वा बिचार होइन ।
सबैलाई सरल भाषा र आफ्नै तरिकामा बुझ्ने गरी श्रुतमय चिंतनमय र भावनामय ज्ञानको आधारमा पस्किएको मात्र ।